KaiOS enweela ihe karịrị otu narị nde ndị ọrụ n'ụwa niile | Gam akporosis
Gam akporo Go na-enweta ọnụnọ na ahịa. Brandsdị ndị ọzọ na-eji ụdị sistemụ nrụọrụ a na ekwentị ha n'ime obere ala, nke a version a tọhapụrụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị nhọrọ na mpaghara ahịa a. KaiOS na-enwetakwa ọtụtụ ọnụnọ na ọ bụworị ezigbo ọzọ na gam akporo Go na ahịa.
Ikekwe ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịdị ka KaiOS. Nke a bụ sistemụ arụmọrụ na anyị na-ezukọ na ekwentị dị mfe, dị ka Nokia 3310 dị ọhụrụ nke dị n'ahịa maka afọ ole na ole ugbu a. Sistemụ arụmọrụ a na-abawanye ọnụnọ ya n'ahịa dị mma, dị ka ụlọ ọrụ n'onwe ya gosipụtara.
Kai Technologies bụ ụlọ ọrụ dị n'azụ sistemụ arụmọrụ a. Ugbu a, ha ka malitere usoro ego ọhụrụ, ihe dịka nde dọla iri ise. Nke a bụ oge ha chọrọ iji ohere iji kpughere ụfọdụ ozi ọhụụ banyere sistemụ arụmọrụ. N'ihi data nke ha hapụrụ anyị, anyị nwere ike ịhụ ọganiihu ọ nwere n'ọma ahịa rue ugbu a.
Dika data ha kpughere, ugbua, enwere ihe karịrị 100 nde ekwentị na-eji KaiOS. Nke a bụ ihe na-agbasawanye na mba 100, ya mere ọnụnọ ya n'ahịa dị ịrịba ama. Nọmba ndị dị mma maka ụlọ ọrụ ahụ, nke chọrọ inwe ike ịnye ihe ọzọ na iOS na gam akporo. Sistemụ arụmọrụ ya na-egosi onwe ya dị ka ezigbo onye ọzọ gam akporo Go n'etiti ụdị dị mfe na ahịa. Ọganihu dị mkpa taa.
KaiOS nwere njirimara onye ọrụ ejikere nke ọma maka ojiji na ekwentị anaghị emetụ aka. Na mgbakwunye, ọ na-akwado ma 3G na 4G / LTE. Ekwentị nwekwara ike inwe ọrụ dịka GPS, WiFi ma ọ bụ NFC dịYa mere, ha nwere ọtụtụ atụmatụ dịka anyị na-ahụ na ekwentị gam akporo taa. Tụkwasị na nke a, ekwenyela na ya na chipsets sitere na ndị nrụpụta bụ isi gụnyere Qualcomm, UNISOC na MediaTek. Ha nwekwara ikike ịnapụta ezigbo ahụmịhe onye ọrụ na ngwaọrụ nwere obere 256MB nke RAM. N'ihi ya, ọ na oru na-pụrụ iche maka mfe ala-ọgwụgwụ ụdị.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ akwadola KaiOS karịa oge. Nokia na Cat bụ ihe atụ abụọ, nke na-eji ya ugbu a, mana ọ bụghị naanị ha. E nwekwara ụlọ ọrụ dịka Alcatel ma ọ bụ Doro, bụ ndị kwadoro sistemụ arụmọrụ a site na mmalite. Google emeela ntinye nke 22 nde dollar na ikpo okwu a. Ha kwekwara nkwa na ha ga-emepe ụdị nke ngwa ha iji rụọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ a. Datafọdụ data na-eme ka o doo anya ọganihu na mmasi nke sistemụ arụmọrụ a na-akpali.
Nzọụkwụ ọzọ dị mkpa bụ eziokwu ahụ bụ na emeela WhatsApp maka KaiOS. Nokia 8810, ekwentị ọzọ nke ọhụrụ nke Nokia, nke na-eji sistemụ nrụọrụ a, inwere ike iji ngwa izipu ozi n’oge obula. Akụkụ ọzọ nke dị oke mkpa na nke a, nyere nkwado nke ngwa a gburugburu ụwa. Ọzọkwa ọ bụrụ na ị nwere ụdị nke ụdị a ị ga-enwe ike iji ngwa ahụ na ekwentị. Ihe nwere ike ịbụ isi maka ọtụtụ ndị ọrụ. Yabụ na enwere ezigbo ọrụ site na ụlọ ọrụ na nke a.
India na Africa bụ isi ahịa ugbu a maka KaiOS. Imirikiti ekwentị ndị a dị n'ime ahịa ndị a, ihe anyị na-ahụkwa na gam akporo Go, nke ewepụtara n'ahịa ndị ahụ. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ nwere olile anya inwe ike ịga n'ihu na ahịa ndị ọzọ yana oge. Nkwalite sitere na ekwentị dịka nke Nokia bụ ezigbo enyemaka na nke a. Ka ọ dị ugbu a, ha na-aga n'ihu na-egosipụta onwe ha dị ka ezigbo ihe ọzọ na gam akporo Go. Usoro ego a nwere ike ịbụ ihe enyemaka ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » KaiOS ka bu ihe ozo di nma nye gam akporo Go
Mbido ngwa ngwa. N'ime afọ abụọ naanị m maara Nokia 2 -too obere, na 3310'2 ″ ihuenyo ga-aka mma. Wepụ ihe nlereanya na-enweghị agagharị na-enweghị mkpuchi -. Ka anyị hụ ma ha malite ụdị ọhụrụ.
Xiaomi nwere nke ya, ọ bụ ụdị mmanya
Anaghị m ahụ ya dị ka ihe ọzọ na Go, ọ bụ karịa, ọ bụghị ihe ọzọ, enwere OS ndị ọzọ na Japan ndị toro eto tupu Android ma nwụọ, echere m na a na-akpọ ya Lingus ma ọ bụ Nexus (ọ bụghị ekwentị) nke ahụ kwadoro NFC ogologo oge tupu gam akporo. Ahụrụ m KaiOS dị ka onye nnọchi maka Symbian, ọ naghị aghọ Symbian Belle mana karịa S60
Ogige Galaxy adịbeghị njikere ịmalite